Yini SQL Injections? - Insight From Semalt
I-SQL Injection iyingozi ejwayelekile, okuyinto abaduni abaningi abayisebenzisayo kuze kube namuhla. Lokhu kuhlaselwakungenza ukwehlisa ukuphepha nokuyimfihlo kokusebenzisa iwebhusayithi. Isebenzisa ukukhubazeka kwekhodi yewebhusayithi eveza imbobo yokuphepha,okuyinto abaduni bangakwazi ukufinyelela database of isayithi. Kusukela kulo mqondo, kuthatha umzamo wabaqaphi abanolwazi ukuthola izimpande futhifikela iseva kusuka endaweni eyikude ngokusebenzisa inethiwekhi. Nge-SQL Injection, umuntu angakwazi ukuqoqa ulwazi kusuka kuwebhusayithinjengegama lomsebenzisi, amaphasiwedi nolwazi lwekhadi lesikweletu.
Ulimi Lokusebenza Oluhlelekile (SQL), lulimi lohlelo, oluvumela ikhompyuthaukufinyelela, ukuhlela noma ukubhala idatha kuseva. I-SQL Injection isebenza kwezinye izinhlobo ezithile zezinqolobane ze-server, ezethula lolu hloboubungozi. Ezinye yolwazi oluhambisana nalokhu kuhlasela zihlanganisa MS SQL Server, Oracle, Access, Filemaker Pro, ne-MySQL. Kusuka kuiphuzu lokubuka lohlelo, zonke izinhlobo ze-intanethi noma ibhokisi lokufaka insimu yombhalo inikeza ithuba lokusebenzisa umyalo kuseva. NikChaykovskiy, the i-Semalt Umphathi Omkhulu Wempumelelo Yekhasimende, uchaza ukuthi abaduni basebenzise lokhu kubungozi kulezi zinqolobane futhi bafeze ukuhlasela okuningi.
Iningi lamawebhusayithi lisekela ezinye izinhlobo lapho umsebenzisi angafaka khona enye idatha..Lokhuithuba yilapho kuphela amakhasimende angakwazi ukuzibandakanya nesayithi futhi athole ezinye zezidingo nezixazululo zabo ku isheke. Amasimu, okungenzekavumela imiyalo yokufaka njengalezi zihlanganisa amafomu, amatafula, izicelo zokusekela, izinkinobho zokusesha, amasimu okuphawula, izinkambu zemibiko, bhalisaamafomu kanye nokungena kumafomu. Iseva ifunda idatha kusuka kulezi fomu njengomyalo, okuvumela umsebenzisi ukuthi ahlele futhi aguqule ulwazikuseva. Amanye amasu okuvimbela lokhu kuhlasela angabandakanya ukubethela kolwazi kumafomu okufaka ngaphambi kokufinyelela kuseva.
Ukuhlaselwa kwe-SQL Injection ukusebenzisa leli thuba. Kukhona ingozi kuseva, okuyintoAbaduni abaningi basebenzisa ukwenza ezinye izinhlobo zemilayezo yalokhu kuhlaselwa. Izigebengu zishintsha ukuphepha kwamaseva ngokubeka ezinyeizinhlobo zemilayezo kuseva. Lokhu kuhlasela kungadalula ulwazi olubalulekile njengolwazi olukhona oluthile oluthile lokufaka umbhalo.Ngaphezu kwalokho, i-hacker ingakwazi ukulayisha amafayela, ukulanda, ukuhlela, ukufaka esikhundleni noma ukususa amafayela avela kuseva yalezi zolwazi. Itkubalulekile ukusebenzisa ikhodi yokuphepha uma udala iwebhusayithi.
Kuwo wonke amabhizinisi e-commerce ukuze asebenze ngokuphumelelayo, kudingeka ukuthi abe khonaizinga elifanele lokuqinisekisa ukuphepha kwe-cyber. Noma kunjalo, senza amawebhusayithi ahlose ubuchwepheshe, okuvumela ukuhweba noma ukuthengakusuka kumthengi. Inhloso yomqaphi akukaze ihlolwe, futhi lokhu kwenza inqubo yonke ibe yingozi. I-SQL Injection yinto ethileuhlobo lweHack yilelo elahlekile, olusebenzisa ukuhlukumeza kwamakhodi amaningi wewebhu. I-hacker ingathola ukungena kwiseva futhi yenza ezinye zezikhuluhacks nokuhlaselwa. Loluhlobo lokungcuphathiswa luyekethisa ukuphepha kwewebhusayithi, futhi lokhu kungenza imizamo yakho ye-SEO ihluleke. Ungakwazisebenzisa lo mhlahlandlela ukugwema ukuhlaselwa kwe-SQL Injection kusayithi lakho. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukukhuthaza amaklayenti akho engozini ezayo futhi ugcinebavikelekile ekuhlaselweni.